အရမ်းမိုက်ပြီး ဆက်ဆီကျတဲ့ ဝတ်စုံလေးနဲ့ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှကို ပြသလိုက်တဲ့ နန်းသီရိမောင်ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး – Online News Post
အရမ်းမိုက်ပြီး ဆက်ဆီကျတဲ့ ဝတ်စုံလေးနဲ့ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှကို ပြသလိုက်တဲ့ နန်းသီရိမောင်ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
နန်းသီရိမောင် က တော့ တိုင်းရင်း သူလေးဖြစ်ပြီး အမိုက်စား အချိုး ကျကျ ခန္ဓာကိုယ် အလှတရား ပေါ်လွင်စေတဲ့ အလန်းစား ပုံလေးတွေနဲ့ ပုရိသတွေ အသည်းနှလုံးကို ဖမ်းစား ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ် မလေးဘဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ သူမရဲ့ အမိုက်စား ဖက်ရှင် တွေနဲ့ အလန်းစား ပုံလေးတွေ က တော့ ပရိသတ် တွေ အတွက် ကြွေသွား စေလောက် တာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ဖြူဖွေးနေ တဲ့ အသားရည် နဲ့ သွယ်လျ ပြေပြစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေး တွေကြောင့်လည်း ပုရိသတွေကို ကြွေစေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
နန်း က တော့ သူမရဲ့ ဆွဲမက် စရာကောင်းတဲ့ ကောက်ကြောင်း အလှတရား တွေကြောင့် ပရိသတ် တွေကြားမှာ ရေပန်းစား နေသူလေးဖြစ်ပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ အလှအပ တွေကြောင့် အမြဲ အချစ်ပို စေသူလေးဖြစ် ပါတယ် ။ သူမ က တော့ သာမန် မော်ဒယ်လ် လေးတစ်ယောက် အဖြစ်နဲ့ အနုပညာ လောကထဲ ဝင်ရောက် လာခဲ့ပေမယ့် သူမရဲ့ ကြိုးစား မှုတွေကြောင့် အခု အချိန် မှာတော့ အားပေးသူ ပရိသတ် အခိုင်အမာ ရရှိလာတဲ့ အနုပညာရှင် မလေးတစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ လတ်တလော မှာတော့ အလန်းစားရိုက်ထားတဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေးကို ဖော်ပြထား တာတွေ့ရပါတယ် ။
ဗီဒီယိုလေးမှာ နန်းတစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိနဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်း နေတာလည်းဖြစ် ပါတယ် ။ သူမကတော့ လတ်တ လော လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာ မှာ အမျိုး သားတွေရဲ့ ဝန်းရံခြင်းကို ခံနေရတာဖြစ်ပြီး လူကြိုက်များ လာတဲ့ မော်ဒယ်လ် အမိုက်စားလေး ဖြစ်ပါတယ် ။ ပရိသတ်တွေတွက် နန်းရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို မျှ ဝေ ပေး လိုက် ပါတယ် … .
နန္းသီရိေမာင္ က ေတာ့ တိုင္းရင္း သူေလးျဖစ္ၿပီး အမိုက္စား အခ်ိဳး က်က် ခႏၶာကိုယ္ အလွတရား ေပၚလြင္ေစတဲ့ အလန္းစား ပုံေလးေတြနဲ႔ ပုရိသေတြ အသည္းႏွလုံးကို ဖမ္းစား ထားတဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ မေလးဘဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ သူမရဲ့ အမိုက္စား ဖက္ရွင္ ေတြနဲ႔ အလန္းစား ပုံေလးေတြ က ေတာ့ ပရိသတ္ ေတြ အတြက္ ေႂကြသြား ေစေလာက္ တာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ျဖဴေဖြးေန တဲ့ အသားရည္ နဲ႔ သြယ္လ် ေျပျပစ္တဲ့ ခႏၶာကိုယ္ေလး ေတြေၾကာင့္လည္း ပုရိသေတြကို ေႂကြေစခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္ ။
နန္း က ေတာ့ သူမရဲ့ ဆြဲမက္ စရာေကာင္းတဲ့ ေကာက္ေၾကာင္း အလွတရား ေတြေၾကာင့္ ပရိသတ္ ေတြၾကားမွာ ေရပန္းစား ေနသူေလးျဖစ္ၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိတဲ့ အလွအပ ေတြေၾကာင့္ အျမဲ အခ်စ္ပို ေစသူေလးျဖစ္ ပါတယ္ ။ သူမ က ေတာ့ သာမန္ ေမာ္ဒယ္လ္ ေလးတစ္ေယာက္ အျဖစ္နဲ႔ အႏုပညာ ေလာကထဲ ဝင္ေရာက္ လာခဲ့ေပမယ့္ သူမရဲ့ ႀကိဳးစား မႈေတြေၾကာင့္ အခု အခ်ိန္ မွာေတာ့ အားေပးသူ ပရိသတ္ အခိုင္အမာ ရရွိလာတဲ့ အႏုပညာရွင္ မေလးတစ္ဦးပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ လတ္တေလာ မွာေတာ့ အလန္းစားရိုက္ထားတဲ့ အမိုက္စား ဗီဒီယိုေလးကို ေဖာ္ျပထား တာေတြ႕ရပါတယ္ ။
ဗီဒီယိုေလးမွာ နန္းတစ္ေယာက္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိရွိနဲ႔ ခ်စ္ဖို႔ေကာင္း ေနတာလည္းျဖစ္ ပါတယ္ ။ သူမကေတာ့ လတ္တ ေလာ လူမႈ ကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ မွာ အမ်ိဳး သားေတြရဲ့ ဝန္းရံျခင္းကို ခံေနရတာျဖစ္ၿပီး လူႀကိဳက္မ်ား လာတဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ အမိုက္စားေလး ျဖစ္ပါတယ္ ။ ပရိသတ္ေတြတြက္ နန္းရဲ့ ဗီဒီယိုေလးကို မၽွ ေဝ ေပး လိုက္ ပါတယ္ … .
Previous post ရန်ကုန် – မန္တလေး အမြန်လမ်းပေါ်တွင် သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် ထွန်းထွန်း ကားအက်ဆီးဒန့်ဖြစ်
Next post အမျိုးသားထုကြီးရဲ့ နှလုံးအိမ်ကိုအမြဲကိုင်လှုပ်တတ်တဲ့ နန်းမွေစံရဲ့ ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ အမိုက်စား Tik Tok ဗီဒီယိုလေး